कसरी सफल बनाउने स्थानीय सरकार?
प्रभावकारी सेवा प्रवाह, जनमुखी विकास र विकासको प्रतिफल जनतामा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सके स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छ।
देशभरका मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान हुने
स्थानीय तहको चुनावका लागि देशभरका सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गरिने भएको छ।
ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने स्थानीय तहको चुनावमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन्।
महिला उपप्रमुख: रुपान्तरणका संवाहक भौतिक प्रगति खासै नभए पनि स्थानीय स्तरमै न्याय निरूपण, सीपमूलक तालीम, सचेतना र रोजगारी मार्फत सामाजिक परिवर्तन ल्याउँदै छन् उपप्रमुख महिलाहरू।
कुन जिल्लामा चुनाव लड्ने कति दल? आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक जिल्लामा चुनाव लड्ने दलको सङ्ख्या तय भएको छ।
स्थानीय चुनावमा सबै दलले आफ्नै चुनाव चिह्न पाउने आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सहित सबै दलले आफ्नै चिह्नमा चुनाव लड्न पाउने भएका छन्।
स्थानीय सरकारले जगाएको आशा केन्द्रीकृत शासनबाट असुविधा र अस्तव्यस्तता मात्र भोग्दै आएका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले ढोकैमा विकास र सेवा पुर्‍याएर परिवर्तनको अनुभूति गराएका छन्।
नार्पा भूमि गाउँपालिकामा जम्मा ४४८ मतदाता, काठमाडौं महानगरमा मात्रै ३ लाख (सूची सहित) ७५३ पालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा बढी र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिका सबैभन्दा कम मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय चुनावमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता, महिलाभन्दा पुरुष धेरै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्।
आयोगले तोक्यो मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत, को कहाँ? निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई उम्मेदवार नबनाउन आयोगद्वारा पत्राचार आगामी स्थानीय तहको चुनावमा मानव अधिकार उल्लङ्नमा दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
स्थानीय चुनावमा दुई करोड मतपत्र छापिने आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई करोड मतपत्र छापिने भएको छ।
स्थानीय चुनावका लागि एकीकृत सुरक्षा नीति पारित
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ ल्याएको छ।
स्थानीय सरकार प्रमुखको अनुभव- चुनाव जित्न जनतालाई धेरै आश देखाएछौं
चुनाव जित्न जनतालाई धेरै आश देखाएका कारण काम गर्दा धेरै चुनौती झेल्नुपरेको स्थानीय सरकार प्रमुखले बताएका छन्। अब आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि यही प्रमुख चुनौती हुने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय चुनावमा कुन पदका उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउने? (सूची सहित)
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारले अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ।
चुनाव नजिकिएसँगै ठूला दल मधेशतिर स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रमुख दलहरू मधेश प्रदेशतिर केन्द्रित हुन थालेका छन्।
देशभरका मतगणनास्थलको भिडिओ प्रणाली मार्फत केन्द्रबाटै निगरानी गरिने आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणनास्थलको भिडिओ प्रणाली मार्फत केन्द्रबाटै निगरानी गरिने भएको छ।
उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
स्थानीय चुनावका लागि ११ र १२ वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
चुनावी आचारसंहिता: सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाउन रोक, उम्मेदवारलाई गाडी र घोडा प्रयोगमा कडाइ आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलले आफ्नै चुनाव चिह्न पाउने आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलले आफ्नै दलको चुनाव चिह्न पाउने भएका छन्।
संघीय सरकारको नियन्त्रणकारी सोच फेरिएन, पालिका बलियो बनाउन अब के गर्ने? स्थानीय सरकारहरूले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा पनि संघीय सरकारको नियन्त्रणकारी सोचमा परिवर्तन नआएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
स्थानीय चुनाव दलीय कि गैरदलीय? दलीय आधारमा हुने स्थानीय निर्वाचनले पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सद्‌भाव र सहिष्णुता भत्काउँदै लगेकाले यसको विकल्प खोज्न आवश्यक छ।
ओलीलाई आयोगको जवाफ- मतगणना गर्न सजिलोका लागि हरियो रङ मतगणना गर्न सजिलो हुने भएकाले मतपत्रमा हरियो रङ प्रयोग गर्ने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
७२ दलले देशैभर स्थानीय चुनाव लड्ने आगामी वैशाखमा ७२ दलले देशैभर स्थानीय चुनाव लड्ने भएका छन्।
स्थानीय चुनावका लागि ८ अर्ब ११ करोडको बजेट सुनिश्चितता आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ।